Imali mboleko ekhuselweyo yindlu mali: yintoni | TeraNews.net
Imali mboleko ekhuselwe yi-real estate: yintoni
umbhali Iindaba zeTera Papashwe ngomhla 03.09.2019
Imali mboleko ekhuselwe yi-real estate yimali efunyenwe mboleko yemali evela kumntu okanye iqumrhu elisemthethweni. Into ethembisiweyo yiyo nayiphi na impahla ethengiswayo enexabiso elithile kwintengiso. Imalimboleko enjalo ihlala ididekile kunye nemali mboleko, engalunganga. Emva kwayo yonke loo nto, umxholo wesibambiso ayisiyo nto yokuthenga.
Inkampani nganye ebonelela ngemboleko mali ekhuselwe yindlu nomhlaba inemithetho yayo. Umzekelo, iibhanki ezininzi zifuna isatifikethi sengeniso. I-MFI MiG yetyala i-Astana ibonelela ngemali ngayo nayiphi na injongo ngokwesikimu esenziwe lula, ngaphandle kwamaphepha. Ikhredithi kukhuseleko lweearhente eziseAlmaty -Isisombululo esikhulu sokukhulisa ishishini lakho.
Imali mboleko ekhuselweyo yindawo ethengisa izindlu: iinzuzo
Ukusebenza kakuhle. Ingxaki ngazo zonke iibhanki, ngaphandle kokukhetha, kukuvuma kwexesha elide lemali mboleko ekhuselwe yi-real estate. Uqingqo-maxabiso kwipropathi, ukukhangelwa kwabathengi kugcino lweenkcukacha zeminye imibutho, ukuvunywa kwesixa-mali kunye ne-ofisi eyintloko, ukusayinwa kwamazwe amaninzi kwizivumelwano, i-inshurensi. Inkampani ye-MiG yeTyala leManaana liyazi ixabiso lexesha.
Ukufumana imali mboleko kufuneka ufumane ipasile yamaxwebhu:
Abantu-ezi ziincwadi zezazisi kunye nokuqinisekisa ilungelo lesibambiso, kunye nesiqinisekiso sedilesi kunye nesatifikethi sobhaliso lwentengiso yendawo ethengisa izindlu nomhlaba;
Amaziko asemthethweni - le ikopi yamaxwebhu engingqi kunye namalungelo epropathi, kunye nemvume yebhunga lolawulo lomntu obolekayo kunye nesatifiketi sobhaliso sepropathi.
Umgangatho ofanelekileyo. Iibhanki zinomdla wokujongela phantsi ixabiso lexabiso lokuthengiswa kwezindlu nomhlaba njengebhanki. Ewe, kwimeko yazo naziphi na iingxaki, ibhanki iya kuhlala inenzuzo. I-MiG yetyala i-Astana ayizibandakanyi kukopela - iindleko ziqikelelwa kumaxabiso emakethi. Ukongeza, inkampani inenkonzo - utyelelo lwengcali yasimahla yovavanyo lwangaphambili lwezindlu kunye nomhlaba.
Indlela ngamnye. Ukongeza ekujongeleni phantsi ixabiso lokubanakho, iibhanki zinomkhethe kuhlobo lwezinto ngokwazo. Imali inikezelwa ngokuzithandela kukhuseleko kuphela kumagumbi akwisakhiwo esiphezulu. Iibhanki zizama ukubonelela ngesixa esincinci kwezinye izibonelelo. I-MiG yetyala i-Astana ayifomati yokuthengisa izindlu nomhlaba. Izindlu zabucala, iiplani zomhlaba, izinto ezingezizo zokuhlala-akukho zithintelo kulowo ubolekayo. Ukuba uyathanda, umxhasi uza kufumana imali mboleko engaphezulu kwe-50-60% yexabiso lezinto ezihlangeneyo.
Imboleko-mali ekhuselweyo yindawo yokuthenga izindlu: ukungonakali
Kuhlala kukho umngcipheko, ngakumbi kwezo ziimeko xa imali ithathwa ngenjongo yokuphuhlisa ishishini ukusuka ekuqaleni. Kodwa nakwezi meko, umbutho we-MiG yeAccount yeMana ukulungele ukulalanisa. Zininzi izixhobo ezinokunceda umntu obolekayo ukuba abuyisele imali mboleko ekhuselwe yindlu ayithengise kwizakhiwo ezifanelekileyo.
Ezi bhanki zinomdla wokungakwazi ukuhlawula amatyala kulowo ubolekayo. IMco MiG yetyala u-Astana usebenzela ikamva. Nje ukuba uthathe imali mboleko ngemibandela elungileyo, ngokuqinisekileyo umxhasi uza kufaka isicelo kwakhona okanye acebise inkampani ukuba nabahlobo kunye nabantu obaqhelileyo. Le yindlela eyakhiwa ngayo ishishini kwihlabathi liphela.
Imfazwe yaseU.S kunye neChina ifikelela kwinqanaba lokungabuyi
Irhafu yedijithali yenzela iApple kunye noGoogle - uluvo
I-Olimpiki- ukuphela kwexesha lekhamera yedijithali
I-ZIDOO Z10 ibhokisi yeTV: iziko lemultimedia yasekhaya
I-2020 ye-sneakers imfashini: U-Adidas Samba ubuyile
I-Nimses, i-Bitcoin, iTesla: iiphiramidi zemali